စမတ်ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုဘယ်လိုတိုးချဲ့မလဲ Gadget သတင်း
Rafa Rodriguez Ballesteros | | ယေဘုယျ, မိုဘိုင်း
မယုံနိုင်စရာတိုးတက်မှု၏အချိန်များတွင် မကြာသေးမီကမတွေးဝံ့စရာဖြစ်သည့်စမတ်ဖုန်းကဏ္sectorတွင် \_ t ဘက်ထရီနေဆဲအတားအဆီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအသစ်အဆန်းပြီးနောက်အသစ်အဆန်းများနှင့်တိုးတက်မှုပြီးနောက်တိုးတက်မှု, ဘက်ထရီချန်ထားဆဲဆက်လက်။ စမတ်ဖုန်းများမှထုတ်လုပ်သောစားသုံးမှုသည်အလွန်ကြီးသည်၊ အနည်းငယ်တက်ကြွစွာနှစ်ရက်ကြာကြာရှည်နိုင်ကြသည်.
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အသုံးပြုသောဘက်ထရီသက်တမ်းသည်ပြproblemနာတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိရှိသည်ကာလအနည်းငယ်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်မျှသာကြာချိန်အတွင်း။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒီဘက်ထရီတွေရဲ့ကြာချိန်ဟာကြီးမားတဲ့ပြproblemနာတစ်ခုပါ စမတ်ဖုန်းတစ်ခုထက်ပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောကြာချိန်ကိုဆိုလိုသည်။ သေးငယ်တဲ့တိုးတက်မှုရှိနေသော်လည်းစွမ်းရည်နှင့်ထုတ်လုပ်သူပေါ်မူတည် အက်ပ်များတွင်စွမ်းအင်ထိရောက်မှု အသုံးပြု, ဘက်ထရီရှိသည် 300 မှ 500 အပြည့်အဝတာဝန်ခံသံသရာတစ်ဝန်ဆောင်မှုဘဝ.
2 အကောင်းဆုံးစံသတ်မှတ်ချက် - ၂၀% မှ ၈၀ ကြားကြား
အထက်ပါတွက်ချက်မှုကိုအပြည့်အ ၀ သံသရာအပြည့် ၅၀၀ ဖြင့်ဖုန်းကိုနေ့စဉ်အပြည့်အ ၀ အားသွင်းပါက၊ ၁၀၀% ကျန်းမာရေးနှင့်အသက် ၂ နှစ်မပြည့်မီ။ ဒါကြောင့်ပုံမှန်အရာဖြစ်တယ် ဤအနှစ်နှစ်အကြာတွင်မတိုင်မီကပင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းကြာရှည်ခြင်းကိုသတိပြုမိကြပါစို့။ ဖုန်းရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့ဘယ်လောက်ကြာရှည်ခံနိုင်မလဲဆိုတာကိုကြိုတင်သိထားမယ်ဆိုရင်ဘက်ထရီကနှစ်နှစ်ကျော်မကြာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်သိပ်ကိုနည်းနေပုံရတယ်။
ဤအခြေအနေကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်စားသုံးသူများ၏လက်ထဲတွင်မရှိပါ။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ထရီများ၏အခြေအနေကိုတတ်နိုင်သမျှအချိန်အတိုင်းအတာအထိတိုးချဲ့နိုင်ရန်သင့်အားအကြံဥာဏ်အချို့ပေးနိုင်သည်။ ဒါဟာရန်အသုံးပြုတဲ့ကိစ္စပါပဲ အသစ်သောအားသွင်းအလေ့အထများပါစေ ၎င်းသည်ဘက်ထရီ၏ကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုသည်။ ထို့အပြင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကခေတ်နောက်ကျနေသောအဓိပ္ပါယ်မဲ့သောမှားယွင်းသောဒဏ္falseာရီများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့စွန့်ပစ်ရမည့်အချိန်လည်းဖြစ်သည်။
ငါဘက်ထရီလုံးဝကိုညှစ်ခြင်းမပြုမီငါစမတ်ဖုန်းကိုအားသွင်းပါကမကောင်းသလား? လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့အပြင်၎င်းသည်မကောင်းသောအလေ့အကျင့်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်စရာ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုရှည်စေဖို့ကူညီပေးနေပါတယ် အချိန်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းတွေရဲ့ဘက်ထရီ မှတ်ဉာဏ်မရှိ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျှော့ချမည်မဟုတ်ပါ။
တစ်ညလုံးဖုန်းကိုအားသွင်းထားတာမကောင်းဘူးလား။ အဘယ်သူမျှမ။ လက်ရှိ lithium-ion ဘက်ထရီများ ဘက်ထရီကိုအပြည့်အ ၀ အားသွင်းရန်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက input ပါဝါကိုဖြုတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ အားသွင်းနှုန်းလျော့ကျသွားသည်ဆိုပါက၎င်းတို့သည်အလိုအလျောက်အားသွင်းပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ဘယ်လောက်ကြာကြာအားသွင်းအားသွင်းထားပါစေ၊ ဘက်ထရီကပျက်စီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အကောင်းဆုံးစံသတ်မှတ်ချက် - ၂၀% မှ ၈၀ ကြားကြား
ဤသီအိုရီသည်ပြည့်စုံသောအားသွင်းစက်ဝန်းပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ၁၀၀% အားသွင်းထားသည့်ဖုန်းသို့ကျွန်ုပ်တို့ဖုန်းအားမသွင်းပါက၊ အားပြည့်အပြည့်လည်ပတ်မှုကိုမတွေ့ရှိနိုင်ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်အားသွင်းစက်အသစ်တစ်ခုပြီးဆုံးသည်အထိအပိုရာခိုင်နှုန်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ယူဆပါစေ အကယ်၍ ဘက်ထရီပမာဏသည် ၈၀% ထက်ကျော်လွန်ပါက lithium jions တည်ရှိသည့်ဆဲလ်များကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လျှော့ချခြင်းနှင့်ကျဆင်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
အလားတူပင် အားသွင်းအဆင့်သည် ၂၀% အောက်သို့ကျသောအခါဘက်ထရီစိတ်ဖိစီးမှုဟုခေါ်သောဖိအားကိုခေါ်သည်။ ထို့အပြင်ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုစေသည့်အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ။အထူးသဖြင့်ဘက်ထရီမှာအချိန်အတော်အတန်ရှိနေရင်၊ ၂၀% နီးပါးရောက်သောအခါဖုန်းကိုအားသွင်းပါ။.
ပြproblemနာကအကြိမ်ပေါင်းများစွာလာတယ် 80% အားသွင်းမှုမကျော်မှီဖုန်းကိုအားသွင်း။ ဆက်သွယ်ပါ။ အထူးသဖြင့်ညတိုင်းအားသွင်းထားသည့်အလေ့အထရှိလျှင်။ အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကိစ္စကိုအရင်မဖြုတ်ပဲဆိုင်းငံ့ထားဖို့ပါ။ ဒါပေမယ့်ညဘက်မှာစမတ်ဖုန်းကိုအားသွင်းပြီး ၈၀% ထက်မပိုဘဲအိပ်စက်ခြင်းမပြုမီ၎င်းကိုအဆက်ဖြတ်လိုက်လျှင်၎င်းင်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုဟာတစ်နေ့လုံးတည်တံ့သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဆိုင်းငံ့ဖြစ်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်, ဒီတာဝန်လွယ်ကူချောမွေ့သော applications များရှိပါတယ်.
ဤအချက်မှာ iPhone သုံးစွဲသူများသည်ကြီးမားသောအားသာချက်ရှိသည် software ကနေလာတာ။ ငါတို့ဘက်ထရီမထိခိုက်ဘူး၊ ကျနော်တို့ဘက်ထရီ menu အတွင်းဘက်ထရီကျန်းမာရေး, "Optimized charging" option ကိုသက်ဝင်ရမယ်။ ညဘက်အားသွင်းတဲ့အလေ့အကျင့်ရှိရင်၊ iPhone သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အားသွင်းခြင်းအလေ့အထများမှသင်ယူသည် သတင်းစာများ။ ၎င်းသည်ဘက်ထရီကို ၈၀% အထိသာအားသွင်းနိုင်ပြီးကျန်သုံးစွဲမှုကိုသင်မသုံးစွဲမီကပြီးဆုံးလိမ့်မည်.
တစ်ဦးကဦး ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော charger သည်ဘက်ထရီများ၏ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုမလွှမ်းမိုးသင့်ပါ။ သို့သော်သတိရဖို့အရေးကြီးသောအရာအချို့ရှိပါသည်။ စံပြနှင့်ထုတ်လုပ်သူအကြံပြုသောအရာကိုဖြစ်ပါတယ် ငါတို့မူရင်း charger ကိုအမြဲသုံးတယ် ငါတို့ဖုန်းဝယ်တဲ့အခါ box ကိုတွေ့ပြီ။ ဖုန်းနှင့်၎င်း၏ဘက်ထရီအတွက်သာရည်ရွယ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်းဖုန်းကိုတစ်နေရာတည်း၌ (သို့) အားသွင်းအားတစ်ခုတည်းဖြင့်အမြဲတမ်းအားမသွင်းပါ။ အခြားကိရိယာဟောင်းများမှ charger များကိုကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏသုံးလေ့ရှိသည်။ သို့မဟုတ်မူလ charger များထက်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ၀ ယ်ယူထားသော chargers များပင်။ တန်ပြန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမရှိသောအချက်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည် ရေရှည်တွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ထရီများ၏ကျန်းမာရေးကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်.
ငါတို့မူရင်း charger ကိုမသုံးတော့ဘူးဆိုရင်၊ ထုတ်လုပ်သူမှအကြံပြုထားသော Volts (V) နှင့် amps (A) ကိုသိရန်အဆင်ပြေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ခါတစ်ရံတိကျသောစံနှုန်းများနှင့်မကိုက်ညီသော charger ကိုအသုံးပြုသော်လည်း၎င်းသည်တိုက်ရိုက်ပျက်စီးသွားမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ် အားသွင်းချိန်သည်ပုံမှန်ထက်ပိုကြာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိနိုင်သည်.
အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကကြိုးမဲ့အားသွင်းပါတယ်ဒီ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်မသက်သာစေမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်အိမ်၌ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်ရှိပါက၊ အလုပ်တွင်အပိုပစ္စည်းတစ်ခုသုံးသည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများကိုအချိန်မရွေးကျွန်ုပ်တို့နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်လိုလျှင်သာမန်အရာတစ်ခု။
ဒီတော့ဝေး, နေသမျှကာလပတ်လုံးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တိုးမြှင့်မပေးပါ လက်ရှိမိုဘိုင်းဖုန်းများကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ခဏနေပါ ဦး ထုတ်လုပ်သူတွေကဘက်ထရီသက်တမ်းကိုမတိုးဘူး စမတ်ဖုန်းတွေ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိပါ။ အချို့သောလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာရမည် သူတို့တတ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးကြာရှည်နိုင်အောင်ဝန်နှင့်ကောင်းသောအသုံးပြုမှု၏။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » စမတ်ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုဘယ်လိုတိုးချဲ့မလဲ